मैले भाइटीका लगाइदिएका ती दुई भाइ::Online News Portal from State No. 4
सम्झनामा ति दिनहरु !
विदेशको ठाउँ। मान्छेहरु पनि अर्कै ग्रहबाट आएका सेता किरा जस्ता लाग्ने। हङकङमा बलियाबाङ्गा नेपालीको काम हुने नै भयो। छ्यामा मामाहरु र हामी जस्ता भुराभुरी चाहिँ पार्क वा कोठामा बस्न बाध्य भइन्थ्यो।यसैक्रम चलिरह्यो।
आज फेरि भाइटीकाको दिन !
र, यो दिदीको इच्छा !
नमरी बाँचे, भाग्यले जुराइदिए फेरि कुनै वर्ष भाइटीका लगाइदिनेछु। त्यतिन्जेलसम्म यो दिदीलाई नभुल्नु है !